Boriborintany fahadimy: anisan’ny vinan’ny kandidà Naina ny fandriampahalemana | NewsMada
Boriborintany fahadimy: anisan’ny vinan’ny kandidà Naina ny fandriampahalemana
Par Taratra sur 09/10/2019
Mihaino ny hetaheta ary mitondra vahaolana hatrany. Niverina teny amin’ny boriborintany fahadimy indray ny kandidà Andriantsitohaina Naina ary nitafa mivantana amin’ny mponina amin’ireo fokontany noteteziny. Nanotrona azy tamin’izany ny depiote Raholdina Naivo sy ireo sefo fokontany Ambatomaro, Antsobolo, Mangarivotra, Ambohimirara, Andraisoro, Tsarahonenana ary Analamahitsy. Anisan’ny nisongadina tamin’izany ary efa nambarany tany amin’ny fokontany hafa ny fanamafisana ny fandriampahalemana eny ifotony. Tafiditra ao anatin’izany ny eny anivon’ny kartie ka hametrahana ny polisy manakaiky vahoaka. Hifameno amin’izany ny fanazavana ny tanàna, amin’ny alina.
Fotodrafitrasa ho an’ny tanora
Anisan’ny vinan’ny kandidàn’ny IRD laharana fahefatra koa ny fanamboarana toeram-panasan-damba sy fanatsarana ireo biraon’ny fokontany. Efa manana vahaolana amin’ny fahazoan’ny mponina rano fisotro koa ny tenany noho ny tsy fahampian’ny rano. Manampy izany ny fanatsarana ny lalan-kely sy ny hijerena ny hamoahana ny rano amin’ny fotoam-pahavaratra.
Tsy nohadinoin’ny kandidà Andriantsitohaina Naina ny fanohanana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Eo ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ho azy ireo, toy ny kianja ho an’ny baolina kitra sy ny basikety na efa manana aza izy ireo. Havaozina izany. Hampanarahana fenitra kosa ny tsena eny Analamahitsy.